Iikomiti zebandla zikwahlukana kweSouth Congress ezigxininisa kwimimandla ethile ye-US nkqubo wasekhaya kunye nakwamanye amazwe kunye nokujongana noorhulumente jikelele. Ngokuqhelekileyo kuthiwa "amancinci amancinci," iikomiti zenkqutyana ziphonononga umyalelo osalindelekileyo kwaye zincoma inyathelo kulowo mthetho kwiNdlu okanye kwiSenethi. Iikomiti zendibano zinika iCongress ngolwazi olubalulekileyo oluphathelele ezizodwa, kunokuba zifundo eziqhelekileyo.
UMongameli uWoldrow Wilson wayebhale ngeekomiti, "Akukude nenyaniso ukuba inkomfa yiseshoni yiNgqungquthela kwimbonakaliso yomntu, ngelixa iKomidi ekamelweni layo ikomiti yeCongress emsebenzini."
Apho isenzo senzeke khona
Inkqubo yenkomfa yenkomfa yilapho "isenzo" senzeka ngokwenene kwinkqubo yokwenza umthetho wase - United States .
Ikamelo ngalinye leNgqungquthela linamalungu ekomiti ekwasetyenzela ukwenza imisebenzi ethile, eyenza amaqumrhu omthetho aphumeze umsebenzi wabo oqhelekileyo ngokukhawuleza kunye namaqela amancinci.
Kukho iikomiti zee-congressional kunye neekomiti eziphantsi kwee-250, ngamnye ohlawulwe ngemisebenzi eyahlukeneyo kunye nazo zonke ezenziwe ngamalungu eCongress. Ikamelo ngalinye linamakomiti alo, nangona kukho iikomiti ezidibeneyo eziquka amalungu omabini. Ikomiti nganye, ehamba nezikhokelo zamagumbi, iyamkela imigaqo yayo, inika ipaneli nganye ibe ngumntu wayo okhethekileyo.
Kwi-Senate, kukho iikomiti ezimileyo ze:
izibonelelo, ezithatha imicengezelo yesikhwama se-federal kwaye ke ngoko, enye yeekomiti ze-Senate ezinamandla kakhulu;
mali; ubudlelwane bamanye amazwe;
shishini kunye nezoshishino; kwaye
Ezi ikomiti ezimileyo zizithuba zephalamende ezisisigxina, kunye neekomiti zabo ezahlukeneyo ziphethe umsebenzi we-nut-and-bolts umsebenzi wekomiti epheleleyo. I-Senate nayo ineekomiti ezine ezikhethiweyo ezixanduva lwemisebenzi ethile: Imicimbi yase-Indiya, imigaqo-nkqubo, i-intelligence kunye nokuguga. Ezi ziphethe imisebenzi yohlobo lokugcina indlu, njengokugcina iCongress ethembekileyo okanye ukuqinisekisa ukunyanzeliswa kwamaNdiya aseMerika.Iikomiti zilawulwa lilungu leqela elininzi, ngokuqhelekileyo lilungu eliphezulu leCongress. Amaqela anika amalungu awo kwiikomiti ezithile . Kwi-Senate, kukho umda kwinani leekomiti apho ilungu elinye linokukhonza khona. Nangona nganye ikomiti inokuqesha abasebenzi bayo kunye nezibonelelo ezifanelekileyo njengoko kubona kufanelekile, iqela elikhulu lihlala lilawula ezo zigqibo.
INdlu yabaBameli inamalungu amaninzi kwiikomiti ezifana neSenate:
imfundo kunye nabasebenzi,
kwimicimbi yangaphandle ,
khu seleko lomhlaba ,
amandla kunye norhwebo,
isayensi kunye nobuchwepheshe,
IiKomiti ezizodwa kwiNdlu ziquka ukuphathwa kweNdlu, ulawulo kunye nokulungiswa koorhulumente, imithetho, imigangatho yokuziphatha ngokusemthethweni, ukuthutha kunye neziseko, nezindlela kunye nezindlela. Ikomidi lokugqibela libhekiselwe kwikomidi yeNdlu echaphazelekayo neyayifuna, enamandla kangangokuthi amalungu ale phaneli akakwazi ukukhonza nakwezinye iikomiti ngaphandle kokukhutshwa okukhethekileyo. Iphaneli inegunya phezu kwentela, phakathi kwezinye izinto. Kukho iikhomishana ezine zeNdlu / zeeNteti. Imimandla yabo inomdla iprinta, irhafu, iThala leeNkcazo kunye noqoqosho lwe-US.
IiKomiti kwiNkqubo yoMthetho
Uninzi lweekomiti zendibano zijongene nemithetho edlulayo. Ngethuba leminyaka emibini yeseshoni yeNgqungquthela, ngokuqinisekileyo ama-bill of bill aphakanyiswa ngamawaka, kodwa ipesenti encinci ithathwa njengendlela yokuhamba.
Isibhengezo esithandekayo sihamba ngamanyathelo amane kwikomiti. Okokuqala, ii-arhente ezilawulayo zinika izimvo ezibhaliweyo malunga nomlinganiselo; okwesibini, ikomiti inamacala okuvakala apho amangqina angqina kwaye aphendule imibuzo; okwesithathu, ikomiti iyanciphisa umlinganiselo, ngamanye amaxesha ngegalelo esuka kumalungu engekho komiti yeCongress; Ekugqibeleni, xa ulwimi luvunyelwene ngalo mqathango uthunyelwa kwigumbi elipheleleyo leengxoxo. Iikomiti zenkomfa , ngokuqhelekileyo zenziwe ngamalungu ekomidi ezimileyo avela kwiNdlu nakwiSenethi abaye baqwalasela umgaqo-mthetho, kwakhona banceda ukudibanisa ingqungquthela enye yebhilidi kunye nomnye.
Azikho zonke iikomiti ezisemthethweni. Abanye baqinisekisa abaqeshwe karhulumente njengabagwebi belizwe; ukuphanda amagosa karhulumente okanye ukunyusa imiba yelizwe; okanye uqinisekise ukuba imisebenzi ethile karhulumente yenziwa, njengokushicilela amaxwebhu karhulumente okanye ukulawula iThala leNcwadi yeCongress.
Imfazwe e-Afghanistan: iMfazwe yaseTora Bora
Iindlela ezili-10 zokumnceda uMfundisi
UBawo Corapi Uphendula kuSOLT: 'Andiyi Kucinywa!'